Koorsada AutoCAD - si fudud u baro - Geofumadas
Janaayo, 2021 Koorsooyinka AulaGEO
Kani waa koorso loogu talagalay in lagu barto AutoCAD oo xoqan. AutoCAD waa barnaamijka ugu caansan ee loogu talagalay naqshadeynta kombiyuutarka. Waa barxadda aasaasiga ah ee aagagga sida injineernimada madaniga ah, dhismaha, naqshadaha makaanikada iyo jilitaanka. Waa barnaamijka ugu fiican ee la bilaabi karo, iyadoo la ogyahay mabaadi'da naqshadeynta ka dibna lagu dabaqayo barnaamijyo takhasus gaar ah u leh farsamooyinka toosan sida Revit (Architecture, 3D Max), Revit MEP (Electromechanical / Plumbing), Injineerka madaniga ah (Qaab dhismeedka, Advance Steel, Robot) , Muuqaalka guud iyo shaqooyinka madaniga ah (Civil 3D).
Waxaa ku jira sharraxaad tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan amarrada waaweyn ee 90% naqshadaha lagu dhisay AutoCAD.
Maxaad baran doontaa?
Aasaaska AutoCAD 3D
Tallaabo-tallaabo amarrada waaweyn
Kumaa loogu talagalay?
Post Previous" Hore Koorsada Python - Baro Barnaamijka
Post Next Koorsada Maskax Dhismeedka leh ETABS - Module 1Next »